बल्ल बा’हिरियो लाहुरे र स्मिताको भित्री र’हस्य, पुनर्मिलन झु’ट कि बा’स्तबिकता ? (हेर्नुस् भिडियो) – Namaste Host
February 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बल्ल बा’हिरियो लाहुरे र स्मिताको भित्री र’हस्य, पुनर्मिलन झु’ट कि बा’स्तबिकता ? (हेर्नुस् भिडियो)
भिडियो अन्त्यमा राखिएको छ, काठमाडौ । तनहुँमा भएको एउटा घटना अहिले सामाजिक सञ्जाल निकै चर्चामा छ । इन्डियन लाहुरे रहेका राहुल गुरुगंले स्मीतासंग निकै सानोमा विवाह गरेका थिए । उनीहरुको प्रेम विवाह थियो । तर स्मीताले गरेको एउटा गल्तीका कारण यति राम्रो जोडी भताभुंग भएको थियोस्मीतालाई जनकपुरका नारायण यादव भन्ने ब्यक्तिले सुरुमा मिठा कुरा गरे । स्मीतालाई विश्वासमा पारे। आफ्नो सानो छोरीलाई स्कूल लैजान भनेर घरवाट निस्केकी स्मीता अन्तत घर छोडेर नारायणलाई भेट्न काठमाडौ गइन् । उनी हराएपछि स्मीताका श्रीमानले खोजी गरे । एक महिना पछि उनी काठमाडौको एक होटलमा नारायणसंग फेला पारे ।